Chii chitsva muIOS 14 Beta 4 | IPhone nhau
Nezuro Apple yakaburitsa betas rechina dzeshanduro dzese dzemafemu ayo matsva gore rino iyo yaakaunza pa WWDC 2020 June apfuura. Ivo vangangove vekupedzisira mune yekuvandudza-chete beta kusvika ikozvino, vatomirira shanduro dzekupedzisira dzevashandisi vese kuti dziburitswe munaGunyana kana Gumiguru.
Kuve watove shanduro yechina, zvishoma nezvishoma maficha matsva anosanganisirwa, uye anongogumira pakukoromora hurema hunowanikwa mushanduro dzavo dzekutanga. Asi pachinzvimbo muchikamu chitsva ichi cheIOS 14 zvimwe zvinonakidza zvitsva zvakaonekwa.
Nezuro masikati, nguva yeSpanish, Apple yakaburitsa nyowani beta, yechina yeIOS 14, kugadzirisa uye kunatsa mabugs anogona kuwanikwa mumabheja apfuura, asi kuwedzera zvimwe zvitsva zvisati zvamboonekwa.
Yekutanga inosvetuka kunze ndiyo nyowani apple tv widget +. Iye zvino tave kugona kuwana vhidhiyo chikuva zvakananga kubva pano. Imwezve yekuwedzera kune iko kuunganidzwa kwemajeti anopiwa neIOS 14.
Yechipiri ndeye kunatsiridzwa kutsvaga. Paunenge uchitsvaga zvemukati muapp, zvakanakisa kurova zvino zvaratidzwa pazasi pewebhu mazano. Iyo Anwendung inoratidza maapplication, Siri matipi, nhau, uye zvimwe pamusoro, nesarudzo yekuwana yakawanda mhedzisiro. In-app yekutsvaga inoramba iripo pazasi peiyo interface.
Iyo yechitatu ruzivo ndeyekuti iyo 3D Touch. Iri basa rakanga ranyangarika mubeta rechitatu reIOS 14, rinoshanda zvakare kana mudziyo wako uchienderana naro.
Uye yechina uye yekupedzisira inoenderana ne iyo COVID-19 yekuzivisa yekuzivisa API. Zvaive zvechokwadi zvaidikanwa. Kana iwe uine iOS 14 mubeta, iwe unogona ikozvino kuisa yekudyidzana yekuratidzira kunyorera munzvimbo yako, kana paine imwe (Covid Radar kuSpain). Kusvika ikozvino yaingoenderana chete neIOS 13.
Idzi ndidzo ina "dzinoonekwa" nhau dzevagadziri idzo dzechina beta vhezheni yeIOS 14. Tinoramba tichikurudzira kusaiisa kana usiri mugadziri, sezvo ichiri test firmware.
Kana iwe usingakwanise kuibata uye uchida kuyedza, isa iyo yeruzhinji vhezheni, iyo isiri yepamberi, asi yakagadzikana. Pano tinotsanangura maitiro kuzviita. Zvinonyanya kuitika izvozvo masikati ano shanduro yayo yechipiri yaburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Chii chitsva muIOS 14 Beta 4
Iyo iPad inoramba ichitungamira musika wepiritsi pasirese